China Excavator Hydraulic sịlịnda mmepụta ihe na ndị na-emepụta ihe | Xinrun
1.Excavator usoro nke ihe abụọ na-eme otu ịwụ ụdị hydraulic cylinder ka a na-eji dị ka ntụgharị usoro mmegharị ihe na-arụ ọrụ na usoro ihe nkedo. PC usoro haịdrọlik cylinder bụ ụdị excavator haịdrọlik sịlịnda na-arụ ọrụ pụrụ iche nyochara na arụpụtara site Komatsu na Kayaba technology nke Japan. O nwere njirimara nke nrụgide na-arụ ọrụ dị elu, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, nrụnye dị mma na disassembly, mmezi dị mfe na nchekwa nchekwa. Akara nke usoro a nke hydraulic cylinder bu akara akàrà. A na-eme ka mkpịsị nke piston siri ike ma kpuchie ya na chromium siri ike, na ike ike mgbe polishing nwere ike iru Ra0.08, A na-emepụta teknụzụ isi nke isi nke Kayaba dịka ọnọdụ ọrụ nke ndị na-egwupụta ihe. Ihe a bu iron ductile, a na - ewukwa isi ya site n’elu mmiri na - ese n’elu mmiri. Ọ nwere ezigbo cushioning arụmọrụ. A na-ejikarị ya eme ihe maka PC usoro hydcaị na ndị na-egwupụta hydraulic ndị ọzọ emepụtara n'ụlọ na mba ofesi.
2. Design atụmatụ nke excavator haịdrọlik sịlịnda:
A.The pistin mkpanaka ka nke nkenke ala elu-ike alloy ígwè. A na-ekpuchi elu nke piston ahụ na ọkara ugboro ruo oke ike nke HRC62. A na-eji ihe odide siri ike kpuchie elu piston ma mee ka ọ dị ọcha iji nye elu na-eguzogide ọgwụ iji gbochie piston ịdọpụ na bumping, Ndụ agbatị agbatị nwere ihe nchekwa nke ọ dịkarịa ala 5 ugboro ike ike na nrụgide akara aka na akụkụ obe kacha nta nke pistin rod na mgbakọ pistin.
B. Ejiri ígwè ductile mee uwe aka ndu dika ebe gwuchara ala. Emere ya site na iron karie ya ma nwekwa akwa iguzogide ya. Ejiri ya na-ebugharị na Japan. Nrụgide nrụgide kachasị nke agba bụ 270n / mm2, ibu dị ike bụ 140n / mm2, ọsọ ọsọ bụ 5m / s, ọnụọgụ esemokwu bụ 0.02 ~ 0.07, ọnọdụ ọrụ bụ - 200 Celsius C na 280 Celsius C, na mpaghara nduzi na-ebelata nrụgide ruo na nke kachasị iji nagide nnukwu akụkụ dị n'akụkụ, Gbasaa ndụ nke ma cylinder ma akara.
C. Ihe nkedo akara piston nwere mgbanaka ájá, mgbanaka akara mgbanaka na mgbapụta hydraulic, nke nwere ike igbochi nkwụsị mmanụ mmanụ nke piston. Ringjá mgbanaka bụ okpukpu abụọ egbugbere ọnụ-àmà mgbanaka. Ọrụ ya bụ igbochi ájá, unyi, ájá na ihe igwe eji abanye. Ọ na-egbochi ọkọ, na-echebe ihe nduzi ma na-eme ka ndụ ọrụ nke akara ahụ dịkwuo ogologo. Ejiri usoro ihe eji eme ihe na-ebelata ihe nkiri mmanụ fọdụrụnụ. Ihe polyurethane na-eme ka njirimara dị mma na esemokwu akọrọ ma na-eme ka mgbochi na-eyi, n'ihi ezigbo nguzogide ya na ozone na radieshon nke ọnọdụ ihu igwe kpatara, ndụ ọrụ dị ogologo. Ọnọdụ ọrụ na - arụ ọrụ sitere na - 35 Celsius C ruo 100 Celsius C, na oke ọsọ dị obere karịa 2 m / s. Isi akara nke mgbanaka pistin bụ akara ụdị egbugbere ọnụ na egbugbere ọnụ abụọ na akara aka na dayameta mpụta. N'ihi mmanu ọzọ dị n'agbata egbugbere ọnụ abụọ, ọ na-egbochi esemokwu na eyi nke akọrọ, na-eguzogide mmetụta na extrusion, ma melite arụmọrụ akara n'okpuru nrụgide efu. Nrụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ 40MPa, ọnọdụ ọrụ ya - 35 ka 110 ℃, na oke ọsọ dị ala karịa 0,5m / s. Ọrụ nke nchekwa nke hydraulic bụ ịmịkọrọ mmetụta na ntụgharị na-agbanwe n'okpuru nnukwu ibu, na-ewepụ oke mmiri dị elu, ma melite ogo nke akàrà. Nrụgide kachasị elu nwere ike iru 100MPa. N'ihi ụdị ọdịdị pụrụ iche dị na egbugbere ọnụ na-agba ume nke nwere ike ịhapụ nrụgide azụ, ọ nwere ike iwepụ nrụgide n'etiti mgbanaka akara na nchekwa nke mkpanaka ahụ na-ebugharị, ma nyefee nrụgide guzobere n'etiti isi akara na akara nchekwa ahụ na sistemụ.
D. A na-eji ígwè 27SiMn mee ihe na-eme ka a na-atụgharị ya na ike dị elu, obere ọdịdị na ịdị arọ, na-asọpụrụ ma na-agbagharị na njedebe dị elu, iji belata esemokwu dị n'ime ma mee ka ndụ ọrụ nke akara ahụ dịkwuo elu.
E. pistin ọkọlọtọ bụ nkedo nwere njikọta abụọ dabara na mkpanaka piston. A na-ekpochi piston ahụ site na ịghasa eriri n'etiti nut na piston nut, iji hụ na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya n'okpuru nrụgide dị elu na akụkụ. A na-ebubata akara akara pistin niile na ngwaahịa Parker na NOK. Edere nsọtụ abụọ nke piston na mgbanaka unyi 4 mm nke PTFE. Dika o nwere oru nke nmikpu nke ihe na-adighi ocha, enwere ike igbochi mmanu imebi ya site na igwakota ya na ihe ndi ozo, ka ijide n'aka na akara ahu nwere otutu oru ndu ma nwee ike igwu egwu na ndu. Mgbaaka na-akwado ya nwere ikike nrụgide dị elu, nke nwere ike iwepu ọla niile na kọntaktị ọla n'etiti piston na ngọngọ cylinder, nye ikike dị elu dị n'akụkụ, na-amịpụta mmetụta, na-eme ka mpaghara kọntaktị ma zere ịchachasị cylinder. Ihe mpempe piston nakweere ụdị akara nke Pak nke mepere emepe, nke nwere uru nke iguzogide nrụgide mmetụta, nkwụsi ike na esemokwu dị mfe. N'ihi arụmọrụ pụrụ iche nke mgbanaka akara, ọ nwere ikike mgbochi extrusion n'okpuru nrụgide dị elu na nnabata dị elu, na nrụgide ọrụ dị elu dị ka 50MPa.
F. Ogwe aka nchekwa na oghere mkpanaka bụ aka na-etinye aka, nke nwere ike ịhazigharị ihe na-akpaghị aka, yana n'ihi na enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti aka nchekwa na piston ahụ, enwere ike belata nrụgide mmalite. The echekwa plunger adopts nchara bọl ịgba, nke nwere ike ise n'elu. Uche a na-echekwa ma na-echekwa nwere ihe na-ese n'elu mmiri. Ya mere, ọ nwere ike ịnwe obere oghere nchekwa, na-edozi etiti ma na-akpaghị aka ma wepụ mmetụta nke njehie coaxial shaft. Ọrụ echekwa dị mma, nke nwere ike belata mkpọtụ na mmetụta ibu ma mee ka ọrụ ọrụ nke igwe ahụ dịkwuo ogologo.
Osote: HSG01-E Series Hydraulic sịlịnda
Electric Hydraulic sịlịnda
Hydraulic sịlịnda .dị
Mini Hydraulic sịlịnda
Obere Hydraulic sịlịnda
Welded Hydraulic sịlịnda